daawo Anticancer - Hospital Shijiazhuang Yiling
The daawada anti-kansarka wakiilka hanuuniyey by cudurada rahaamad aragti
Formula gaar ah
Catalog Caymiska Caafimaadka 1.National
2.National Drug macay
Barnaamijka 3.Beerta ay taageerayaan Grant ka Research New Drug Foundation of Maamulka Gobolka of Medicine Chinese Dhaqameed
Recipe The gaar ah
Khusayso bukaanka burada sida soo socda:
tayada 1.Improve nolosha tilmaamay in calaamadaha tumourous sida rabitaanka cuntada oo hoos u, lalabo, matag iyo daciifnimo
2.Taking hor iyo ka dib radiotherapy iyo chemotherapy yarayn kartaa kooxda-saameynta iyo in la wanaajiyo saamaynta daaweynta.
3.Applicable in hor iyo ka dib qalliinka buro iyo daaweynta yada dhaqancelinta hagaajiyo difaac, dedejiyaan dib u soo kabashada iyo dheeraan surrival
Yareeyo Waxyeellada danbe ee Kordhi Kiimiko iyo Saamaynta Shucaaca
Dhibaato u muuqday in 26 bukaan ah oo dhan 308 ee group Yangzheng Xiaoji inta lagu guda jiro dhawrid, oo u muuqday in 9 bukaan ah oo dhan 104 ee group control, kaas oo dhex xukun ahaayeen tacaluqda daawada tijaabo ah, oo waxba ma ay saameyn ku daaweynta.
Inta lagu guda jiro tijaabo caafimaad, la falanqeeyo natiijooyinka baaritaanka wadnaha, shaqada kelyaha, kaadida iyo saxarada baaritaanka joogtada ah ee kooxda YZXJ, ma jirto farqi cad kooxda gacanta; heerka of muuqashada abnormity cusub jiray ka hooseeya heerka of caadi diinta, taas oo loo marayo xukunka jirin waxba iima aheyn in daawada.
Isbarbar labada kooxood, 55 kiis ahaayeen efficacious iyo 8 xaaladaha ahaayeen inefficacious koox YZXJ, heerka waxtarka ahaa 87,3%, iyo 37 xaaladood waxay ahaayeen efficacious iyo 23 kiis ahaayeen inefficacious in kooxda ay gacanta ku, heerka waxtarka ahaa 61.5%, barbardhigay heerka laba groups'efficacy ah, farqiga u ahayd wax iska cad, P <0.05.
Kaabsal YZXJ isku dhafan oo therapy la tacaalid ah, daaweynta 123 bukaan buro sanbabada ee wejiyada Meta iyo goor dambe, heerka oggolyahay kooxda daaweynta ee ka xoogbadanyahay si loo xakameeyo group, P <0.05. Maxkamad ku tilmaamay in Yangzheng Xiaoji kaabsal lahaa shaqo ee anada kansarka, iyo tallaabada hammiga la chemotherapy-gelinta, tayada nolosha ee group YZXJ ka xoogbadanyahay si loo xakameeyo group, iyo dareen xun ahaa wax ka yar group gacanta. Maxkamad ku tilmaamay in YZXJ kaabsal yareyn karto dhibaatooyin soo raaca iyo in la kordhiyo difaaca jirka si chemotherapy sidoo kale.
Hagaajinta Astaamaha Tumourous Kordhi Tayada nolosha
Hagaajinta Astaamaha Tumourous Kordhi Tayada nolosha Isbarbar oggolyahay on calaamadaha laba kooxood ', shaqaalayn tijaabo darajo-tiriya, Z = -4,060, P <0,001, farqiga u lahaayeen muhiimad tirakoobka, Kooxda YZXJ ka xoogbadanyahay si loo xakameeyo group.
Calaamadaha waxaa ka mid ah tirada buuxda caloosha iyo distention, anorexia, spiritlessness iyo daciifnimo, xanuun iyo tabar ah dhexda iyo jilbaha, kaadi cas iyo saxaro, xummad iyo xanuun, dhamaan calaamadaha kor ku xusan in la sixi doono by dhibcood. jirka carrabka, jaakad carrabka iyo garaaca wadnaha ayaa waxaa ka mid ahaa in shuruudaha calaamadaha iyo sidoo.
Isbarbar calaamadaha laba kooxood oo ka hor iyo ka dib daaweynta, shaqaalayn tijaabo Mann-Whitney, P> 0.05, labada kooxood waxay ahaayeen dhigma; is barbar ee D-qiimaha labada kooxood, kor P calaamado '<0.05, farqiga u lahaayeen muhiimad tirakoobka, Kooxda YZXJ ka xoogbadanyahay si loo xakameeyo group hagaajinta astaamaha caafimaad oo kor ku xusan.
Yangzheng Xiaoji kaabsol sicad yareeyo Xanuun iyo Kordhi Xoog Physical
Yangzheng Xiaoji kaabsol sicad yareeyo Reaction Alimentary Canal sabab u Chemotherapy Drugs
Xoojinta Function Immune Growth joogsada Tumourous
Case caadiga ah
Bukaanka Mr. Yu, lab, 62 sano jir ah
Aug 15 th, 2005, oo leh calaamado sida qufaca xab iyo dhiig, dulmi xabadka iyo emaciation, iyada oo loo marayo baaritaanka CT heerka A isbitaalka fasalka saddexaad laga helay calaamadaha sida kansarka midig ee sambabada (diagnosis pathologic ahaa adenocarcinoma). Tan iyo effusion pleural midig, hawlgalka ku jiray, iyo xiriirka ayaa la sheegay badbaado u noqon doono dhowr bilood kaliya. Aan chemo iyo daweynta radio daroogada, qaadashada kaabsal Yangzheng Xiaoji, 4 kaabsoosha halkii mar, 3 jeer maalin kasta, Nov 14 th, 2005 (84-maalmood daaweynta), ka rabitaanka cuntada iyo miisaanka kor u kacay iyo xoogga jirka ahaa wanaajiyey, CT dib-u-baaritaanka: burada dhowr qeybood ilaa xad iyo effusion midig pleural waxaa si buuxda u nuugo.
Sep 15 th, 2006 (daawaynta 13-bilood ah '), bukaanka rabitaanka cuntada, miisaanka oo xoog jidheed si muuqata u korortay, iyo shaqo yar ahayd la heli karo. Apr 15 th, 2007, rabitaanka cuntada oo ahaa mid caadi ah, miisaanka helay iyo hawlaha maalin walba soo kabsaday si caadi; CT dib-u-baaritaanka: ma jirto farqi cad.
Yangzheng Xiaoji kaabsol
【Ansixinta No.】 License Maamulka Drug State Z20040095
【Waxyaabaha ay ka kooban Main】 radikis Astragali, Fructus Ligustri Lucidi, radikis Ginseng, fangas-awaalka, Rhizoma Curcuma Phaeocaulis, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Walaaq-shiileyso), Herba Hedyotidis Diffusae iwm
【Tilmaamayaasha】 Kobcinta difaac iyo buro anada
【Codsiyada Clinical】 Qaadashada ka hor hawlgalka kor u qaadi kara heerka guusha howlgalka. Dedejiyaan dib u soo kabashada, hoos u metastasis oo looga hortago soo noqoshada ka dib markii qaliin In kor loo qaado waxtarka of radiotherapy iyo chemotherapy, hoos u qiyaasta chemotherapy, iyo in la yareeyo dhinac saamayn. Hagaajinta xumo iyo tayada nolosha iyo miisaanka helaan daaweynta palliative.
【Maamulka & Qiyaasta】 qaad afka ah, 4 kaabsoosha mar kasta oo 3 jeer maalintii
【faahfaahinta】 0,39 g / kaabsal
xirmo 36 kaabsoosha / box 【Xidhmada】 Aluminum-caag ah, 400 sanduuq / kartoonka